कागती पानीले दिनको सुरुवात गर्नुका सात ठूला कारण यस्ता – Purbihotline
बिहान एक गिलास कागती पानीले ऊर्जा र मेटाबोलिजममा वृद्धि गर्छ । यसका साथै, कागती पानीले मुडलाई राम्रो बनाउनुका साथै डिप्रेशन र तनावलाई टाढा राख्ने विभिन्न अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । यसले सासलाई पनि ताजा राख्छ । एजेन्सी
← के रातमा काम गर्दा क्यान्सर हुन्छ ?
समर्पण ध्यानः शरीर र चेतनालाई जोड्ने अद्वितिय विधी कसरी गर्ने ? →